8 Ball Pool 4.0.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.0.0 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
ဂိမ္းမ်ား အားကစား ဂိမ္းမ်ား 8 Ball Pool
8 Ball Pool ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
8 ဘောလုံးကိုရေကူးကန်အတွက်နွေရာသီပွဲတော် join နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးလည် & ဝင်းနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်အချိန်ကန့်သတ်ကမ်းလှမ်းမှုစမ်း!
•ကမ္ဘာ့ # 1 ရေကူးကန်ဂိမ်း - ယခု Android ပေါ်မှာ•!
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ Play! Legends နှင့်အတူ Play ။ သင့်မိုဘိုင်းပေါ်တွင်ထိခိုက် Miniclip 8 Ball ကိုရေကူးကန်ဂိမ်း Play နှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာ!
1-1-ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် 8 ကစားသမားပြိုင်ပွဲယှဉ်ပြိုင်
ယင်းအလေ့အကျင့်နယ်ပယ်တွင်၌သင်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုမွမ်းမံ 1-vs-1 ပွဲအတွက်ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာယူ, ဒါမှမဟုတ်ဆုဖလားများနှင့်သီးသန့်တွေကိုအနိုင်ရပြိုင်ပွဲဝင်!
သင့်ရဲ့ cue နဲ့စားပွဲပေါ်မှာ Customize! သငျသညျ play တိုင်းအပြိုင်အဆိုင် 1-vs-1 ပွဲစဉ်များတွင်ရှယ်ယာမှာရေကူးကန်ဒင်္ဂါးပြားရှိပါလိမ့်မယ် - ပွဲအနိုင်ရနှင့်ဒင်္ဂါးပြားသင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏။ သငျသညျပိုကြီးလောင်းကြေးနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့အဆင့်ပွဲဝင်ရန်ဤသုံးနိုငျ, သို့မဟုတ်ရေကန်ဆိုင်အသစ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်။
မိတ်ဆွေများကကစားလွယ်ကူသည်: သင်၏ Miniclip သို့မဟုတ် Facebook account ကို sign in နှငျ့သငျဖြောင့်ဂိမ်းမှသင်၏မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်နေရာမှာမဆို, အချိန်မရွေးမိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်နှင့်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုချွတ်ပြပါ။
8 Ball ကိုရေကူးကန်ရဲ့အဆင့်ကို system ကိုသင်အမြဲစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဆိုလိုသည်။ Play ကိုသင့်ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သင်သာအကောင်းဆုံးကိုရေကူးကန်ကစားသမားဆန့်ကျင် play ဘယ်မှာပိုပြီးသီးသန့်ပွဲစဉ်နေရာများမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန်တိုက်စစ်ပါတယ်။
Miniclip အားဖြင့် --Download ရေကူးကန် Now! -
miniclip.com/pool မှာက Web ပေါ်မှာကစား
http://on.fb.me/Wx4f23: 8 Ball ကိုရေကန်လိုပဲ
Miniclip ကဲ့သို့ပင်: http://facebook.com/miniclip
Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ: http://twitter.com/miniclip
Miniclip အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာပါ: http://www.miniclip.com
8 Ball Pool အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
8 Ball Pool အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
8 Ball Pool အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
joneusa စတိုး 1.59k 580.45k
8 Ball Pool ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
Pooking - ဘိလိယက်စီးတီး
APK အေၾကာင္း 8 Ball Pool အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.0.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.miniclip.com/android/privacy-policy/
File Size: 54.58MB
Release date: 2018-08-25 19:13:20
လက်မှတ် SHA1: 87:61:53:43:65:7C:0A:98:15:5D:71:EC:5A:31:58:21:8B:9A:9F:62
ထုတ်လုပ်သူ (CN): edward barber
အဖွဲ့အစည်း (O): miniclip
နယ်မြေ (L): oeiras
နိုင်ငံ (C): PT
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): lisbon
8 Ball Pool APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ